Aktarka Caanka ah ee Balwaan oo markii ugu horeysay ka hadlay xaalada Somalia +Cod+Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Aktarka Caanka ah ee Balwaan oo markii ugu horeysay ka hadlay xaalada Somalia +Cod+Video
Aktarka ku caan baxay jilida aflaamta Hindiga ee Sunil Shety oo Soomaalidu u taqaano (Balwaan) ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaalada Somalia iyo arrimo ku saabsan taageerada uu ku leeyahay dadka Soomaalida ah ee aflaamtiisa daawada.
Sunil Shety oo wareysi siiyey Idaacada BBC-da ayaa sheegay inuu aad u jecel yahay Soomaalida, ayna yihiin dad wanaagsan oo qalbi furan, isagoo xusay inuu aaminsan yahay taageerayaal badan oo aflaamtiisa xiiseeya inuu ku leeyahay gudaha Somalia.
Mar la weydiiyey inuu isu yaqaano magaca ay Soomaalidu isaga u taqaano ee ah Balwaan ayuu sheegay in Balwaan uu ahaa magaca filimkiisii ugu horeeyey ee uu jilay uuna isaga xusuus gaar ah u leeyahay.
“Magaca Balwaan macnihiisu waa awood waana ku faraxsanahay iney Soomaalidu magacaas ii yaqaanaan, wuxuu ahaa filimkeygii ugu horeeyey ee aan jilo, waxaan kaloo aad ula socdaa in aflaamta hindiga lagu turjumo luuqada Soomaaliga waa talaabo horumar leh” ayuu yiri Sunil Shety.
Waxaa uu sheegay inuu rajaynayo in mustaqbalka dhow uu booqasho ku tago Soomaaliya oo uu xusay iney hadda ka soo kabaneyso dagaalo sokeeye iyo qalalaase muddo dheer ka jiray.
Madaxda Soomaalida ayuu ugu baaqay iney ka shaqeeyaan nabada iyo dib u dhiska dalka, wuxuuna si gaar ah farta ugu fiiqay in laga shaqeeyo waxbarashada caruurta oo uu sheegay iney yihiin mustaqbalkii berito, isagoo ugu danbeyn hawada ka salaamay taageerayaashiisa ku sugan Somalia.